27th August 2020, 12:30 pm | ११ भदौ २०७७
असह्य भएर अस्पताल पुगेका उनलाई ढोकामै पालेले रोके। अस्पतालको थर्मोगनमा उनको ‘टेम्प्रेचर’ ९६ डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी देखाएन। उनले गोजीबाट आफ्नै थर्मोमिटर निकालेर नापे - ज्वरो १०३ देखायो। अनि अस्पतालले भर्ना लिन मानेन।
‘ज्वरो त पहिले पनि आएको थियो तर त्यसरी गाह्रो बनाउँदैन थियो। म न सुत्न सक्थेँ न उठ्न। त्यत्रो हुँदा पनि मैले कोभिड-१९ हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरिँन,’ उर्बिनले सुनाए, 'किनकि मैले मास्क, स्यानिटाइजर र पञ्जा कहिल्यै छाडेको थिइँन।'
पुग्ने बित्तिकै उनलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएको बिरामीका रुपमा अस्पतालले फिभर क्लिनिकमा राख्यो। औषधी दियो - सिटामोल।
उनले झल्याँस्स सम्झिए - दुई साताअघि भक्तपुर सल्लाघारीस्थित इम्पेरियल पार्टी प्यालेस गएका थिए। विदेशबाट आएकाहरूलाई राख्न बनाइएको होल्डिङ सेन्टर। त्यहाँ नेपाली सेनाले खाना खुवाउँदै थिए। उनी मानव सेवा आश्रमको तर्फबाट रासन सहयोग पुर्‍याउन पुगेका थिए।
‘प्रसव वेदना आफै भोग्न नपरे पनि म त्यो दु:ख कल्पन्थेँ। कस्तो हुन्छ होला त्यो छट्पटाहट भन्ने समानुभूत गर्न खोज्थेँ,’ उर्बिनले भने, 'कोरोना भाइरसले मलाई त्यस्तै छट्पटाहट् दिलायो। मैले आफैलाई जन्माउन ११ दिन व्यथा सहेँ।'
‘मेरा समस्या सिटामोलले ठीक हुँदैन भन्ने मलाई थाहा थियो तर स्वास्थ्यकर्मीले थाहा नपाएजस्तै गरे,' उनले भने, 'नत्र जीवनजल दिन नसक्ने अस्पताल होइन नि यो।'
'आफू काम गर्दा बिरामीको पीडा समानुभूत गर्थेँ। सहज महसुस गराउन कुराकानी गर्थेँ। बिरामीलाई सुन्थेँ। तर आफू बिरामी हुँदा भने बिल्कुल फरक अवस्था भोग्नु पर्‍यो।'
त्यसपछि उनले दैनिक राउन्डमा आउने चिकित्सकसँग मुखै फोरेर गुनासो गरे - ‘नर्सहरूले कस्तो छ? सोधिदिएनन्। आफैले भन्दा पनि सुनिदिएनन्।'
‘पीपीई लगाएको बेला बाहिरको आवाज सहजै सुनिदैन भनेर नर्सले भनिन्,’ उर्बिनले प्रतिप्रश्न गरे, 'पीपीई लगाएपछि त बिरामी संक्रमितको नजिकै आएर पनि हालखबर सोध्नु पर्ने होइन र?’
शारीरिक पीडा, कोरोनामो त्रासले दिएको मानसिक तनावमाथि आइसोलेसनको कमजोर व्यवस्थापनले डर थपिरेहको थियो। त्यसमाथि यी सबैसँग जुँध्दै गर्दा उनको ज्वरो ज्यूँकात्यूँ थियो। संक्रमण पनि बढ्दै गयो। उनलाई निमोनिया भयो। त्यसको दुई दिनपछि बल्ल नशाबाट औषधी दिइयो।
प्रष्ट्याउन आफ्नो नजिकै रहेका एक संक्रमित जोडीको पनि कथा सुनाए - ५० वर्ष कटेका ती दम्पती फरक शय्यामा छन्। फरक लक्षण र संक्रमणको फरक अनुभूति बोकेर। श्रीमती लक्षणविहीन संक्रमित। श्रीमान ज्वरो र खोकीले पीडित। एउटै भाइरसको संक्रमण हुँदा पनि एकअर्काको फरक अवस्था। तन्दुरुस्त श्रीमती संक्रमित हुन् भन्ने स्वीकार्न श्रीमानलाई नै गाह्रो। सिकिस्त श्रीमान् भाइरसकै कारण गलेका हुन् भन्ने स्वीकार्न श्रीमतीलाई गाह्रो।
'नभेट्दा पनि हुने आफन्त र साथीभाइलाई नभेटौं। फोन र इन्टरनेटको भरपुर प्रयोग गरौं। तरकारी, रासन र फलफूल बजार निस्कने बहाना नबनाऔं। घरमा बस्न वाक्क भएँ भन्दै बाहिर ननिस्किऔं। आइसोलेसनको बसाइ झनै वैरागलाग्दो हुन्छ,' अस्पतालको शैय्याबाट उनको सन्देश, 'केही समय चिया र चुरोट एक्लै पिउँदा पनि हुन्छ। साथीहरू स्वस्थ रहे, न पिउने कुराको स्वाद फेरिन्छ, न जिन्दगीकै।'
नेपाल सेरोफेरो[ 2020-08-27 10:11:53 ]
घरेलु उपचार गर्दै घरैमा बसेको भए अस्ती निको हुन्थ्यो ।
आतिएर अस्पताल जाने काम नगरौ । सचेत रहौ ।
- कोरोनाको औषधी नै छैन त किन अस्पताल जाने ?
Ranjana Baral[ 2020-08-30 03:29:51 ]
Manisha Baral[ 2020-08-30 02:43:40 ]
Indu Singh[ 2020-08-28 02:17:09 ]
Shree Gurung[ 2020-08-29 12:54:05 ]
Subha Karki[ 2020-08-28 03:33:25 ]
Hajur lai xito niko hosa bhagwan sag kamna..
Xuchoo DimpleBoy[ 2020-08-28 12:30:12 ]
Get well soon 🙏👍🏼👍🏼👌
Manju Rana[ 2020-08-28 04:53:20 ]
Get well soon take cate yourself too
Kaushalya Bhandari[ 2020-08-28 07:12:33 ]
Sarai ramro janachetanamulak lekh hajur
Dhurba Shahi[ 2020-08-27 03:23:02 ]
Sacchai yestai hota hpma
Mayer Gharti[ 2020-09-11 04:07:22 ]
Malai ni testai bhai raixa
Arjun Kulung[ 2020-08-30 02:28:06 ]
Soyata TL[ 2020-08-30 07:49:14 ]
Mina Pandey[ 2020-08-30 06:32:50 ]
Keri Chamling[ 2020-08-30 02:44:31 ]
Rupa Kunwar Adhikari[ 2020-08-29 05:05:37 ]
India ra Nepal ka doctor nurse bahek aru desh ka doctors nurses haru ley birami Lai affnai bachha jasto Gari polite ra Maya Gari treatment garchan... Yeha ka doctor resaune karaune Mai hu vanchhan.. Thaha chaina kina... Yo swasthey sewa uniharu ko lagi bojjj jasto gari patient ko treatment garchan😢
Thimra Samrat[ 2020-08-29 02:45:40 ]
Get well soon sir🙏😥
PoOnam Grg[ 2020-08-29 02:21:51 ]
Get well soon🥺
PrBn Srestha[ 2020-08-29 01:02:21 ]
Ramesh Chiluwal[ 2020-08-29 12:39:41 ]
Get well soon sir 😢
Rama Bhattarai[ 2020-08-29 12:34:49 ]
Ranjana Upadhyaya[ 2020-08-29 11:02:55 ]
Rashila Thapa[ 2020-08-29 08:44:29 ]
Puja Thapa[ 2020-08-29 08:00:26 ]
Radhika Paudel[ 2020-08-29 07:32:14 ]